पोकली झरना अवलोकन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउन थाले ! « Etajakhabar
पोकली झरना अवलोकन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउन थाले !
प्रकाशित मिति : २० कार्तिक २०७६, बुधबार ०९:५२
पूर्णप्रसाद न्यौपाने – पोकली झरना अवलोकन गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । जिल्लाको पश्चिमी भेगमा पर्ने देशकै दोस्रो अग्लो उक्त झरनामा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढेका हुन् । विगतमा ओखलढुङ्गा र आसपासकै केही युवामात्रै झरनामा पुगेर रमाउने गरेका भए पनि अहिले झरना हेर्नकै लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउन थालेका लेतीका रामप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो ।
“पहिला त गाउँका मान्छे मात्रै फुर्सद मिलाएर जान्थे”, उहााले भन्नुभयो, “अहिले त देशका विभिन्न ठाउँदेखि मात्रै होइन विदेशी पनि झरना हेर्नकै लागि भनेर आउँछन् ।” उहाँका अनुसार मौसम सफा भएको समयमा दैनिक ४०–५० सम्मले झरनाको अवलोकन गर्ने गरेका छन् ।
महोत्सवसहितका कार्यक्रम गरेर झरनाको प्रचार–प्रसार भएसँगै यहाँ पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेको पोकली झरना सेवा समाजका संस्थापक अध्यक्ष गुरुकेदार बरालले बताउनुभयो । “हामी पोकली छाँगो भन्थ्यौँ, त्यो छाँगो अहिले झरना भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले त्यसको महत्व बुझेर जब प्रवद्र्धन गर्न लाग्यौँ, त्यो छाँगो नै हाम्रो मुख्य सम्पत्ति रहेछ, पहिल्यै विकास गर्न पाएको भए अहिलेसम्म धेरै राम्रो भइसक्थ्यो होला ।” उहाँकै नेतृत्वमा विसं २०६३ मा झरना सेवा समाज गठन गरेर आधिकारिकरूपमा प्रवद्र्धन थालिएको थियो ।
विसं २०६४ मा बालकृष्ण ढुङ्गेल सभासद निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक झरनालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । ढुङ्गेलकै पहलमा झरनाको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विसं २०६५ वैशाख २२ गते पर्यटन महोत्सव गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महोत्सवको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । जिल्लाको लिखु गाउँपालिकामा पर्ने सो झरना १३० मिटर उचाइको छ । गत वर्षबाट उक्त झरना अङ्कित हुलाक टिकटसमेत प्रचलनमा छ ।
समुद्री सतहदेखि करीब दुई हजार २०० मिटर उचाइमा सो झरना रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको कालिकोटस्थित १४८ मिटर उचाइको पचल झरना नेपालको पहिलो उचाइको र पोकली दोस्रो झरना मानिन्छ । लिखुखोलाको उत्तरपूर्वबाट झर्ने सो झरना नजिकै पर्ने घना जङ्गलले ढाकेको गौरी वन अर्को आकर्षण हो । खोलाको चट्टाने भागमा बजारिँदै झरेको पानीको बेगले आनन्द दिन्छ । चट्टानमा पानी ठोक्किएर आकाशबाट पानी दर्किंदा घामको झुल्को र अस्ताउने बेला इन्द्रेणी लाग्छ ।
उक्त झरनासँग सम्बन्धित थुप्रै किंवदन्ती छन् । झरनाको २०० मिटर तल हाँडीदह छ । परापूर्वकालमा झरना आसपासमा रिठ्ठे झाँक्री बसोबास गर्ने र गाउँमा आवश्यक पर्दा हाँडीदहमा धुप हालेर प्रार्थना गरेपछि भाँडाकुँडा दहबाट निस्कने गरेको जनविश्वास छ । सुनुवार र ब्राह्मण समुदायको बाहुल्यता रहेको पोकली झरना क्षेत्र आसपासमा तामाङ, शेर्पासहित अन्य जातजातिको पनि बसोबास छ । बहुसांस्कृतिक एवं बहुधार्मिक पहिचानको सम्भाव्यता बोकेको पोकली क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटकलाई स्थानीयवासीले लोभलाग्दो जातीय झाँकी देखाउँछन् ।
पहाडी क्षेत्रको उत्कृष्ट भूगोल भएको सो झरना क्षेत्र सहासिक खेल ‘क्यानोनिङ’ को समेत सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकिएको छ । झरनाको नजिकै निर्माण गरिएको माधव मन्दिरले उक्त क्षेत्रलाई धार्मिकस्थलका रूपमा समेत चिनाएको छ । माधवलाई भगवान् शिवको पुरानो रूपसमेत मानिन्छ । झरनासम्म पुग्न पक्की सिँढी र झरना दर्शन गर्न नजिकै झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ ।
धान झुलेको र गुराँस फुलेको बेला पर्यटकीय आकर्षण थप्ने पोकली झरना हिउँदको समयमा पानी कम भए पनि महोत्सवसहितका कार्यक्रम गरेर स्थानीयवासीले पर्यटकको आवागमन बढाइरहेका छन् । यही कात्तिक १६ र १७ गते पनि पोकली झरना सांस्कृतिक महोत्सव सम्पन्न भएको छ । झरना र आसपास क्षेत्रमा रहेका जिल्लाका सम्भावित पर्यटकीयस्थलको प्रवद्र्धनार्थ कार्यक्रम गर्ने गरिएको झरना सेवा समाजका अध्यक्ष मिलन विष्टले जानकारी दिनुभयो । सो झरना हुँदै सगरमाथाको दृश्यावलोकन गर्न थोलेदेम्बा–पिकेसम्मको पदयात्रासमेत त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ ।
पोकलीमा सन् २०२० मा २० हजार पर्यटक ल्याउने स्थानीय अगुवाको योजना छ । ‘नेपाल पर्यटन वर्ष २०२०’मा घुम्नुपर्ने सय पर्यटकीय गन्तव्यमा उक्त झरनालाई सरकारले समेटेपछि हौसिएका स्थानीयवासीले पर्यटक ल्याउन होडबाजी गरिरहेका छन् । केही दिनअघि मात्रै झरनाको प्रचारप्रसारका लागि स्थानीयवासीले झरना महोत्सव सम्पन्न गरेका छन् । झरनालाई विश्वमा प्रचार गर्न वृत्तचित्रसमेत बनाइएको छ ।
जिल्ला सदरमुकामदेखि पश्चिममा पर्ने सो झरना पुग्न सदरमुकामबाट १२ घण्टा पैदलयात्रा गर्नुपर्छ । सदरमुकाम जोड्ने कच्ची सडकको यात्रा बसमा करीब पाँचदेखि छ घण्टा लाग्छ । तर, राजधानी काठमाडौँदेखि सोझै पोकली झरना पुग्न भने करीब राजधानी काठमाडौँबाट १८३ किलोमिटर दूरीमा रहेको झरनासम्म यातायातको पहुँच छ । काठमाडाँैबाट सिन्धुलीको खुर्कोट, रामेछापको मन्थली–धोवी–शिरिसे हुँदै झरनास्थल पुग्न सकिन्छ ।
राजधानीबाट रामेछापको मन्थली नजिक हलेदेसम्म पक्की सडक छ । त्यहाँबाट करीब तीन घण्टा कच्ची सडकमा यात्रा गर्नुपर्छ । जिल्लामा मानेभञ्ज्याङस्थित लिब्जु मन्दिर दर्शन गरेर सदरमुकाममा सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्मभूमि, स्रष्टापार्क, लगलगे भ्यूटावर अवलोकन गरी ठाडेको घरवासमा बास बसेर भोलिपल्ट बिहान जन्तरधाप हुँदै देशका अग्ला सातडाँडामध्येको एक थोलेदेम्बा हुँदै पोकली झर्न सकिन्छ । त्यहाँ बसोवासका लागि घरवासको पनि शुरुआत गरिएको छ ।
सरकारले सय गन्तव्यको सूचीमा राखेसँगै पोकली झरनाको प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम थालिएको छ । सङ्घीय सरकारको रु २५ लाख, प्रदेश सरकारको रु ५० लाख र गाउँपालिकाको रु १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि सांसद विकास कोषमार्फत रु ५० लाख विनियोजन गर्नुभएको छ । विनियोजित बजेट पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नेगरी पोकलीको विस्तुत गुरुयोजना तयार हुँदैछ ।
वृत्तचित्र निर्माण, फनपार्क, झरना आसपासमा सिँढी निर्माण तथा त्यस क्षेत्रमा २५ घरवास, बसपार्क निर्माणलगायत ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर डिपिआर बनाउने काम भइरहेको समाजका महासचिव शम्भु बरालले जानकारी दिनुभयो । डिपिआरमा पोकली झरना क्षेत्रमा चिल्ड्रेनपार्क, स्विमिङ पुल, सिसाको पुल, गौतमबुद्ध र शिव–पार्वतीको मन्दिरजस्ता संरचनाको डिजाइन गरिनेछ ।
काठमाण्डौंका यी नगरपालिकाको वडाका जग्गा ल्याण्ड पुलिङ हुदै
काठमाडौँको पूर्वोत्तर भेगका तीन नगरपालिकाको १८ हजार रोपनीमा जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) गरी व्यवस्थित बस्ती
पहिरो पीडित भन्छन्, ‘तान्दातान्दै श्रीमती र छोरीलाई पुर्यो’
म्याग्दी – धवलागिरि गाउँपालिका–६ रिखकी ३३ वर्षीया हीरा जुग्जालीको शुक्रबार बिहानै कोदो रोप्न बारीमा जाने
लिभर क्यान्सरबाट ग्रसित अमिताभ बच्चनलाइ पनि लग्यो कोरोना, अस्पतालबाट भावुक हुदै सार्वजनिक गरे पहिलो भिडियो
काठमाडौँ- भारतीय सिने जगतका चर्चित अभिनेता अमिताभ वच्चनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ।अमिताभ आफैँले शनिबार
प्रेमी रोजेको भन्दै सामाजिक संजालमा समाचार आएपछि कुनै सत्यता नभएको पुर्णीकाको भिडियो सार्वजनिक
काठमाण्डौ । पुर्व युवरागी पुर्णीका शाहले आफ्ना बारेमा मिडियमा गलत प्रचार गरिएको भन्दै मिडियालाई त्यसो
२८ असार २०७७, आईतवार १०:२६
पहिरोमा पुरिएर उद्धारको पर्खाइका ३६ घण्टा बिताइन ६ महिनाकी गर्भवती मञ्जिताले
२८ असार २०७७, आईतवार ०९:२५